Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo adkaysan kari weyday idacadihii mucaaradka
Itobiya oo adkaysan kari weyday idacadihii mucaaradka
Dawladda Jermalka ayaa waxay cadeysay hadda inay Itobiya tashwiish ku wada furtay idaacadihii dibadda ee ku wajahnaa dadka shacabka ah. Idaacdda Deutsche Welle ee laga leeyahay dalka Jermalka ayaa cadeysay in labadii maalmood ee la soo dhaafay lagu furay idaacadooda ku wajahan Itobiya tashwiish xoogan. Sidoo kale ayaa idaacadda VOA qaybta afka amxaariga iyo kan Oromada loogu furay tashwiish xoogan.
Waxaan iyada is-weydiin lahayn idaacadaheena oo mudaba ay tashwiish xoogan la daba socdeen gumaysiga si aanay dadweynaha gudaha u ogaanin heerka uu marayo halganka shacabka iyo dhibaatada uu gumaysiga ku hayo dadweynaha nugulka ah.
Marka laga yimaado idaacadaheena tashwiishka ay la daba socdeen, falkan hadda ay la beegsadeen idaacadaha caalamiga ah ee Deutsche Welle iyo VOA oo hadda ka hor waagii doorashada ay ka socotay ay ku fureen ayaa waxaa lala xidhiidhinayaa banaanbaxyada la filayo inay dalkaa hadheeyaan bilaha soo socda. Banaanbaxyadan ayay dadka qaban-qaabinaya ugu magac dareen –Beka- oy ka soo luunjeexdeen –Kifaaya- oo ahaa halku dhigii shacabka Masaarida, taasoo macnaheedu yahay (kugu filan) oo loola jeedo 20kii sano ay dalka xukumayeen Wayaanaha.
Dawladda Itobiya ayaa diiday inay tashwiishka ku furto idaacadaha taasoo qaanuunka dawliga ah ee idaacadaha ka soo horjeeda, hasa ahaatee KT Meles ayaa hadda ka hor cadeeyay inay idaacadha ka soo horjeeda la dagaalamayaan. Qalabkan ayaa sida la ogsoon yahay waxaa ku caawiyay Itobiya dalka Shiinaha oo ku horeeya qalabkan wax lagu tashwiishiyo.